Omaar al-Bashir ganna 30'n booda aangoorraa bu'anii waraanni aangoo qabateera - BBC Afaan Oromoo
Al-Bashir to'annaa jala ooluun, waraanni aangoo qabateera
11 Apr 201911 Apr 2019
Pireezidant al-Bashir aangoo gadhiisuu jedhamee eegamaa jira
'Har'a hojiin jiru, deebiaa' Lammii Itoophiyaa Kaartum irraa
"Al-Bashir lammilee Itoophiyaaf akka Abbaa ture"
Lammileen Sudaan ibsa waraanaa si'aayinaan eegaa jiru
Sudaanitti labsiin yeroo muddamaa labsameera
Yeroon eerame hundi akka UK tti.
...tti maxxanfame 13:19 11 Ebla13:19 11 Ebla
Waraanni 'fuuluma beeknu nutti deddeebisaa jira'
Gareewwan Sudaan keessatti mormicha dura bu'ummaan gaggeessan keessaa 'Sudanese Professionals Association' ibsa Twitararratti baaseen, tarkaanficha qeeqeera.
To'annoon waraanni amma taasise kun fuuluma amma dura beeknuufi namootuma aangorra turan deebisee fide jedheera.
Ibsichi Afaan Arabaan
...tti maxxanfame 13:07 11 Ebla13:07 11 Ebla
Namtichi ibsa waraanaa dubbise eenyu?
Pireezidantii itti aanaa fi Ministira Ittisaa Awaad Mohaammad Ahimad Ibin AufImage caption: Pireezidantii itti aanaa fi Ministira Ittisaa Awaad Mohaammad Ahimad Ibin Auf
Waraanni Sudaan pireezidant Omar al-Bashir aangoo irraa buusuu ibsa TV biyyaalessaa biyyattii irratti kan dubbisan, Pireezidantii itti aanaa fi Ministira Ittisaa Awaad Mohaammad Ahimad Ibin Auf jedhamu.
Leetinant Jeneraal Auf namni ganna 65, loltuu beekamaafi duraan akka walitti qabaa ajajoota waraanaa biyyattii ta'uun nama hojjete.
Yeroonni Ministira Ittisaa ta'etti waraanni Sudaan hidhannoo isaa daran fooyyeffachuutu himama.
Ajajaa tika waraanaa ta'ees hojjetee jira.
Muuxannoon waraanaa, dipiloomasii fi siyaasaa qabu nama Omar al-Bashir bakka bu'u ykn adeemsa cehumsaa irratti dhiibbaa guddaa uumu isa taasiseera.
Namoota walitti bu'iinsa Darfuuriin wal qabatee Ameerikaan qoqqobbii irra keesse keessaa tokko.
Mootummaafi hidhattota mootummaan deeggaraman riqicha ta'ee wal qunnamsiisaa ture jetteetu isa himatti Ameerikaan.
Ergamni dhugaa barbaacha Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii bara 2005 tarree namoota walitti bu'iinsa Daarfuuriif itti gaafatamu jedhe keessaas Letenaant Jeneraal Ibin Auf isaan tokko.
Sababa kanaani Ameerikaan qabeenyi isaa akka hin sochoone bara 2007 kan uggurte.
...tti maxxanfame 12:58 11 Ebla12:58 11 Ebla
'Dararaan poolisii nurraa dhaabbata jedheen abdadha,'' lammii Itoophiyaa
Erga oduun aangorraa kaasamuu al-Bashir dhagahamee booda ''Sudaan nagaa taanaan, nus nagaa taana,'' jechuun lammiin Itoophiyaa BBC Afaan Oromoof yaada isaa kennee jira.
''Akka lammii Itoophiyaa tokkootti poolisoonni biyya kanaa, rakkoo guddaa nurraan gahaa turan,'' kan jedhu jiraataan magaalaa Khaartuum kun, rakkoon kunis akka jijjiiramu abdii akka qabu dubbata.
...tti maxxanfame 12:29 11 Ebla12:29 11 Ebla
'Al-Bashir kaasuun qofti gahaa miti'
Erga angoo gadhiisuun al-BAshir dhagahamee kaasee namoonni hedduun waan itti dhagahame ibsaa jiru.
''Ministirri Waraanaa kunis qaama sirna uummanni Sudaan irratti qabsaa'aa turanidha... Al-Bashirin kaasuun qofti gahaa miti' jedheera gaazexessaan Daniel Ominde Okoth jedhamu.
''Akkan yaadutti uummanni Sudaan eelee sibilaa irraa ibidatti utaalaniiru,'' jedheera.
...tti maxxanfame 12:21 11 Ebla12:21 11 Ebla
Labsii hatattamaa ji'oota sadiif turu
Qabxilee ijoo ibsa Ministirri Ittisa biyyaa TV Biyyaalessaa irratti kennan:
Pireezidant Bashir to'annaa jala oolfamanii bakka nageenyi isaa mirkanaa'etti geeffamu.
Labsiin hatattamaa ji'oota sadiif turu labsameera.
Waraanni yeroo cehumsaa waggoota lamaaf turu ni hoggana.
Manni maree cehumsaa waraanaan durfamu ni hundaa'a, bal'inni isaa ibsa biraan kan himamu ta'a.
Heerri mootummaa bara 2005tti bahe ni haqama.
Dabalataan Ministirri Ittisaa Awaad Mohaammad Ahimad Ibin Auuf mirgi namoomaa lammilee akka tikfamuufi lammileen tarkaanfii nageenyaa fudhatamuuf akka obsa qabaatan gaafatanii jiru.
...tti maxxanfame 11:59 11 Ebla11:59 11 Ebla
Amma nu gaheWaraanni Sudaan aangoo qabate
Pireezidantin Sudaan Omaar Hasan al-Bashir ganna 30 booda aangoo gadhiisuun, waraanni biyyattii aangoo qabateera.
Ministirri Ittisa Biyyatti ibsa TV Biyyaalessaa irratti kennaniin, waraanni yeroo cehumsaa waggaa lamaaf aangoorra tura jedhan.
Omar al-Bashir "bakkaa nageenyi isaa mirkanaa'etti" ni hidhamus jedheera.
...tti maxxanfame 11:52 11 Ebla11:52 11 Ebla
Amma nu gaheIbsi kennamaa jira
TV biyyoolessaa Sudaan irratti ibsi dubbifamaa jira.
...tti maxxanfame 11:19 11 Ebla11:19 11 Ebla
'Itti-baha isaa eeggachuunu nu ajjeesseera'
Dubartiin biyyattii Addee Hibaa Alii kan mormii hiriirichaa keessatti hirmaataa jirtu Kaartuma irraa BBC’tti himte jirti akkasu jechuun:
‘‘Ammaan tana namni hundinu oala daandiirratti argama. Oduu eeggachuun nu ajjeesseera. Ummanni loltuu irraa ibsa seera qabeessa ta’ee eeggachaa jira. Aangoo dabarsuu irratti waliigalteen daqiiqaa dhumaa akka jiru isaadha.’’
Akkasumas daandiiwwan irrattis mallattoonni akka poolisoonni ykn humnootiin nagenyaa pirezidaantichaaf amanamo ykn dhiisoo ta’aa isaaniif mallattoon mul’isu tokkolleen hinjiru. Garuu loltoota qofaatu mormitoota waliin akka dhaabbatan mul’ataa jira.
‘‘Wanti ammaan tana mul’ataa jirus humnoota deegarsaa fi qondaaltoota loltuu daandiirra marmaaraa fi waajjira mummee loltuu eegaa jiranitu akkuma guyyoota arfan darban taasisaniitti mormitoota eegaa jiru.Poolisii uffanaa dandii cuqulisaa ykn humnoota beekamoo ajaja tajaajila nageenya tikaa biyyattii jala turan omaa hin mul’atan.’’
Pirezedaanti Bashiriin aangoorraa kaasuun ga’aa miti –mormitoonni sirna dimokiraasii sirrii barbaadu jette.
Ergaan waraabame akka jedhutti: “Namoonni walabummaa, haqaafi walqixxummaaf sagalee dhageessisaa jiru. Callisee Pirezedaant Bashiriin aangoorraa buusuu miti.Walumaa galatti sirnni waggoota 30 tiif tureefi haccuuccaafi dhiibbaan isa waliin ture bakka gadi dhiisuudha. Kanaaf, kan nuti barbaannu ce’umsa gara dimokiraasiidha.Nuti mootummaa walaba ta’e aangoo gara uummataatti dabarsu barbaanna.”
...tti maxxanfame 11:04 11 Ebla11:04 11 Ebla
‘Amman kana muddamni ta’aa jira’
Namni hiririicha keessatti hirmaataa jiru tokko fuuldura waajjira mummee loltuu fulduraa ’gabaastuu BBC Chaarloote Atwuudiif ergaa ergeef. Akka jechuunis itti hime: ‘‘Akkuma ummanni ibsa raadiyootiif eegachaa jiraniin, amma muddamni ta’eera.’’
Mormitoonnis haasaa loltuun waadaa galamee dhagahuuf sa’aatii torbaa ol eeggachaa jiru. Garuu raadiyoon motummaa ammas muziqaa warraaqsaa xabachisaa jira.
Shakkii loltoonnis pirezidaanti Omaar al-Bashiir aagnoo akka gadhiisaniif dhiibbaa irratti ni taasisu jechu dhagahamaa jira.
...tti maxxanfame 10:35 11 Ebla10:35 11 Ebla
Suuraalee Sudaan: Mormitootaa fi loltoota
Walitti dhufeenyi mormitootaafi humnoota waraanaa fooyya'aa jiru, egeree Pireezidant Omar al-Bashir murteessa jedhama.
Suuraaleen kunniin dhiyeenyatti ka'an.
Loltoonni karaa mormitoonni irra dabran, manneen gubbaa dhaabbachuun deeggarsa agarsiisaas turanImage caption: Loltoonni karaa mormitoonni irra dabran, manneen gubbaa dhaabbachuun deeggarsa agarsiisaas turan
Loltoonni warra hiriira bahan gidduu ennaa deeman, deeggarsaan simatamaa turanImage caption: Loltoonni warra hiriira bahan gidduu ennaa deeman, deeggarsaan simatamaa turan
Lammiileen ammas oduu pireezidantichi aangoo dhiiseera jedhu eeggachaa jiruImage caption: Lammiileen ammas oduu pireezidantichi aangoo dhiiseera jedhu eeggachaa jiru
...tti maxxanfame 9:58 11 Ebla9:58 11 Ebla
'Hidhamtoonni siyaasaa hundi hiikaman'
Maddeen Sudaan akka TV Al Arabiyaa kan Sa'udiin deeggaramutti akka himanitti hidhamtoonni siyaasaa biyyattii hundi gadi dhiifamanii jiru.
Lammileen biyyattii ammallee ibsa waraanni biyyattii kennuuf jedhu eeggataa jiru.
TV'n Al Arabiyaa akka Oduu Simbirtuu jechuun "hidhamtoonni siyaasaa SUdaanhundi gadi dhiifaman" jedhee gabaaseera.
Oduun aanga'oonni duraanii fi kan ammaa hidhamaa jiru jedhus bahaa jira.
Eebla 6 irraa eegalee mormitoonni alaa galuu didanii pireezidant al-Bashir aangoorraa akka bu'u gaafataa turani.
...tti maxxanfame 9:30 11 Ebla9:30 11 Ebla
Waraana Sudaan: Seenaa siyaasaa biyyattii keessa qaama gahee olaanaa qabu
Pireezidant Al-Bashiir ALA bara 1995ttiImage caption: Pireezidant Al-Bashiir ALA bara 1995tti
Erga 1956 Sudaan walabummaa argattee qabee Humni Waraanaa Sudaan siyaasa biyyattii keessa shoora olaanaa taphateera.
Humni waraanaa kun gaaffii uummataan aangootti erga dhufee booda, fedhii uummataa gara cinaa qabuun ukkaamsaa jira jira jechuun daran qeeqama.
Erga bilisummaatii waggaa lamaan booda bara 1958tti, Mej Jeneraal Ibrahim Abboud hokkora malee fonqolcha gochuun aangoo qabatan.
Mormiin hawaasaa cimee bara 1964tti waraanni aangoo dabarsee kenne.
Ergasii waraanni humna jabeeffachuun 1969tti fonqolcha mootummaa Koloneel Jaafar el-Nimeeyiriin durfamu taasisuun, aangootti olbahan. Nimeeyiriin ofimasaaniiyyuu fonqolcha mootummaa fi mormiitti baraniiru.
1985tti, Let-Jen. Abdel Rahman Swar al-Dhahab loltoota muraasa qabachuun el-Nimeeyirii kuffisan.
Waggaa tokkoon booda al-Dhahab Ministira Muummee uummataan filaman, al-Sadiq al-Mahdi jedhamaniif aangoo dabarsan.
Haatahu malee, ganna sadiin booda, 1989tti loltoonni Islaamummaa leellisan Birgaader Jeneraal Omaar al-Bashiriin durfaman, Al-Mahdi aangoorraa gaggeessan.
Waggaa soddomaan duuba, Bashir ammallee mormii cimaa waliin aangoorra jiru.
...tti maxxanfame 9:14 11 Ebla9:14 11 Ebla
Bulchiinsa al-Bashir duraa irraa eegalee waggoota 34'f Kaartuum keessa kan jiraatan lammiin Itoophiyaa Obbo Nagaasii Tafarraa sababa mormii kanaan rakkoon lammilee Itoophiyaa irra gahe hin jiru jedhu.
Lammileen biyyattii nagaan gammachuu isaanii ibsachaa magaalattii keessa naanna'aa jiru jechuun yaada isaanii BBC'f kennaniiru.
"Amma mootummaan waraanaan durfamu aangootti bahuutu dubbatamaa jira, bara dhufu filannoon akka adeemsifamu abdiin jira" jedhu.
"Bulchiinsi al-Bashir lammilee Itoophiyaaf mijataa ture, al-Bashiris akka abbaa turan" kan jedhan Obbo Nagaasiin, mootummaan waraanaan durfamu aangootti yoo bahe haalli jiru rakkisaa ta'uu danda'a jechuun sodaa qaban ibsu.
Haa ta'u malee jijjiiramni dhufu qaala'iinsa jireenya ni fooyyessa jedhanii abdatu.
Lammiin Itoophiyaa biroo konkolaataa isaanii oofanii warra gammachuun karaatti bahanii sirbaa jiranitti akka makaman nutti himan tokko, namnuu manatti hin hafne, sochiin jiru naga qabeessa jedhu.
Ministirri Waraanaafi Pireezidantiin itti aanaa aangoo ni fudhatu jedhamee eegamaa turus, lammileen biyyattii isaan irraas mormii waan qabuuf mariitti akka jiran dhaga'eera jedhu namni kun.
Marichi akkuma goolabameen ibsa ni kennu jedhamee eeganaa akka jirus nutti himaniiru.
...tti maxxanfame 8:23 11 Ebla8:23 11 Ebla
Lammileen Sudaan ibsa waraanni biyyatti ni kenna jedhee miidiyaan biyyaalessaa dubbate si'aayina guddaan eegaa jiru.
Biyyattiin mormii ji'ootaaf ture kan pireezidant Omar al-Bashir aangoo irraa akka bu'u gaafatuun raafamaa turte.
Aangoo gadi dhiisuun isaa waan hin oolle tilmaamni jedhu dabalaa jira, garuu hanga yoona ifatti wanti himame hin jiru.
Mormitoonni kumaatamaan lakkaa'aman Kaartuumitti walgahaa jiru. Loltoonni buufata raadiyoo biyyattii to'atanii tamsaasni akka adda citu taasisaniiru.
Muuziqaa Sudaan faarsutu walitti fufiinsaan Raadiyo irraa dhagaahama.
Kanneen mormii kana qindeessan mormitoonni daandiirra akka turan gaafataa jiru.
Al-Bashir qofa osoo hin taane mootummaan guutummaatti aangoo akka gadi dhiisuu barbaadu jedhu gabaastonni.
Kibxata humnooti nageenyaa mormitoota keessaa namoota ajjeesuun gabaafamaa ture.
Loltoonni kaan ammoo deebisanii humnoota nageenyaa kanatti dhukaasaa akka turanis himameera.
...tti maxxanfame 8:07 11 Ebla8:07 11 Ebla
'Har'a hojiin hinjiru, deebi'aa'
Muhaammad Ziin, lammiin Itoophiyaa, Sudaan magaalaa Kaartum jiraatu BBC Afaan Oromootti waan hime, ''Miinal Baarii bakka jedhamuun jira. Minaal Baarii jechuun buufata konkolaataa jechuudha,'' jedheera.
Muhaammad hojiin isaa magaalaa Kaartum keessa wayita tahu, har'a ganama akkuma guyyaa kaanii ganamaa ka'ee hojii deeme.
Dhaabbanni keessa qaxaramee hojjetus, ''Har'a hojiin hinjiru, deebi'aa'' akka isaanin jedhe nutti himeera.
Dabalataanis, ''Naannolee biyyattii irraa gara biiroo isaatti deemaa jiru. As Khartoum irraas ganama barii irraa jalqabanii gara biiroo muummichaatti Alqihaadaa bakka jedhamu, bakka hiriirtoonni har'a guyyaa 5ffaaf bulaa jiranitti deemaa jiru.
Akka jarri jedhutti yoo tahe, har'a aangoo isaa ni gadhiisa jedhaa jiru, Waan ta'uuf deemu ni ilaalla.
...tti maxxanfame 8:05 11 Ebla8:05 11 Ebla
Waa'ee hojii waraanaa fi siyaasaa pireezidantii Sudaan Omaar al-Bashir gabaabumatti kunoti.
Bara 1973 waraana Arab-Isra'el keessatti loltuu Masirii ta'anii lolaniiru.
Bara 1989 fonqolchaa Islaamotaan deeggarameen gara aangoo pireezidantummaa Sudaanitti dhufan.
Bara 1990'n keessa hogganaa al-Qaayidaa Osaamaa biin Laadaniif koolu galtummaa kennee ture.
Hoggana biyyaa yeroo duraaf bara 2009 mana murtii yakkaa idil-addunyaan himatame, garuu yakka waraanaa Daarfuur ittiin himatame ni haale.
Finciltoota Kibba biyyattii waliin bara 2005 nagaa buuse.
Bara 2011 Sudaan Kibbaa akka foxxoqxu walii gale. Kunis Sudaan qabeenya boba'aa ishee dhibbeentaa 75 dhabsiise.
Waa'een jireenya dhunfaa isaa badaa hin beekamu. Ijoollee hin qabu.
...tti maxxanfame 7:48 11 Ebla7:48 11 Ebla
Tilmaamni bulchiinsi Omar Hasan al-Bashiir goolabamuufi jedhu guddatee dhaga'amaa jira.
Magaalaa guddoo biyyatti Kaartumitti ibsi humni Waraanaa biyyatti ni kenna jedhame eegamu bulchinsa Al- Bashiir waggoota 30'f ture goolabuu mala jedhame tilmaamamaa jira.
Lammileen Kuma kudhanitti lakka'aaman Sambata duraa irraa eegalee Waajira Muummee Humna Ittisa biyyatti fuulduratti hiriira bahuun Al-Bashiir aangoorraa bu'uu akka qaban gaafata jiru.
Loltooti Raayyaa Ittisa Biyyaa mormitoota kanarra harka qabaa akka turan himamaa ture.
Jeneraalonni biyyatti koree Humna Waraanaa eenyu hogganu akka qabu Biiroo Muummee Humna Ittisa biyyatti keessatti mariyachaa jiraachu gaazixeessitoonni Sudaan himaniiru
...tti maxxanfame 7:47 11 Ebla7:47 11 Ebla
Dubartii mallattoo mormii Sudaan taate
...tti maxxanfame 7:42 11 Ebla7:42 11 Ebla
Waraanni Sudaan ibsa murteessaa akka kennu eegama
Gabaasni keenya kallattii eegaleera.